Madaxweynaha Puntland oo la kulmay wakiilka Qaramada Midoobay ee Somaliya | Dayniile.com
Home Warkii Madaxweynaha Puntland oo la kulmay wakiilka Qaramada Midoobay ee Somaliya
Madaxweynaha Puntland oo la kulmay wakiilka Qaramada Midoobay ee Somaliya
Waxaa maanta booqasho noogu yimi ergayga qaramada midoobey ee Soomaaliya James Swan iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ay ka midyihiin Midowga Europe, Midowga Africa iyo Safiirka Sweden ee Soomaaliya Per Lingarde .
Wuxuu ahaa kulan muhim ahaa oo kusoo aaday wakhti ku haboon, marxaladda cusub ee Puntland gashay oo doorasho hal qof iyo hal cod ah u dareertay. Waxaan ka wada hadalnay arrimaha Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya dhinacyada amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo horumarka.
Intii uu Kulanka noo socday waxaan aad xoogga u saarnay sidii xal looga gaari lahaa sidii ay u qabsoomi lahayd Doorasho ku dhacda Jawi degan, oo nabdoon oo laga gudbo dhammaan caqabadaha hadda hareeyay ee hortaagan, caqabadaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee jira iyo kuwa farsamo ee imaan kara ama taaganba.
Waxaan aad u rajeynaya in dalka Soomaaliya hore u tallaabsan doono, doorashadana wakhtigeeda ay noqon doonto hadii alle idmo , caqabadaha jirana runtii dadka Soomaaliyeed iyagoo kaashanaya beesha caalamka ee ay qaybta ka yihiina , ay xallin doonaan hadii illaahay idmo si hore loogu socdo. Waxaan rajeynaya in Isbedelka dadka Soomaaliyeed ay sugayaan iyo deganaansho nabad u horseeda inuu abuurmi doono hadii alle idmo.
Ugu danbeyn waxaan ku faraxsanahay waxyaabihii qabsoomay sanadka lagu jiro oo Hay’addaha iyo ururada deeqda bixiya , ee ay ugu horeyso Midowga Europe, Wadamada Sweden ay gacanta ka geysteen mashaariicda socota iyo guud ahaan Hay’addaha UNKa ah ee halkan ka howlgala , waxaan rajeynaya in ay muhim aheyd waxyaabihii qabsoomay.
Previous articleKolonyo gaadiid ah oo uu la socday Wasiirka Qorsheynta Jamal oo lagu Celiyay Duleedka garoowe
Next articleDadka reer Jarmal oo natiijada hordhaca u doortey Scholz inuu noqdo Ra’iisal wasaaraha dalkaasi
The father of the man suspected of knifing a senior Conservative lawmaker to death on Friday said that the attack has left him "traumatized."...